I-Homeopathy, amanzi e-lymphatic kanye ne-osteopathy ngezinkinga zomlenze
Lesi sihloko sizoba mnandi kulabo abaphishekela izinkinga ngezinyawo zabo ngokungapheli. Lapha ngifuna ukukhuluma ngezindlela ongabhekana nazo nezinkinga ezikhona.
I-Homeopathy: njengokuphathwa okunjengokuphathwa
I-Homeopathy iyindlela ehlukile ekuqondiseni imithi yesimanje, manje ethandwa kakhulu. Ukuze kutholakale umphumela ohlala njalo kusukela ekusetshenzisweni kwamakhambi we-homeopathic, ukwelashwa okude isikhathi eside kuyadingeka ngoba umbuzo othi "imithi elula", okungukuthi, ukusetshenziswa kwezinto ezingalimazi umzimba. Ukungaboni imiphumela esheshayo, iningi labantu lenqaba ukuqhubeka nokwelashwa, becabanga ukuthi lezi zimali azihambisani nazo. Kodwa iphuzu liwukuthi udinga ukuwa nesineke.
Cabanga ukuthi ukuhlengikaza kwezilwane akuhambisani nezimbangela zezifo, kusiza umzimba ukuba ubuyisele izindlela zawo zokuzivikela ezilwa nezifo.
Isimiso sokuqala: isimiso sokufana. Ama-homeopath abheka ukuthi umkhiqizo wokwelapha kufanele ubangele isifo esinempilo emzimbeni onempilo, ukwelashwa okusetshenziswa kuwo. Ngakho-ke, isibonelo, i-caffeine isetshenziselwa ukwelapha ukuleleka.
Isimiso sesibili: isimiso sesidakamizwa esisodwa. Lesi esinye sezici zalesi siqondiso. Ama-homeopath ngokuvamile abeka ukwelashwa ngomuthi owodwa owodwa, owenziwe ngokuhlanganisa izingxenye ezahlukene. Nakuba kunamanje okuthiwa yi-pluralists abangavumelani nokuzinikela ekufundiseni kweHahnemann, owakhulume umuthi owodwa, futhi osebenzisa izixazululo ezihlukahlukene ze-homeopathic.
Isimiso sesithathu: isimiso samanani amancane. Uphika ukuthi izinto ezisetshenziselwa ukwelashwa kufanele zihlanjululwe kaningi ngamanzi ukuze kutholakale ukuhlushwa okungenani.
Amakhambi ase-homeopathic ekwelapheni imilenze ekhulile syndrome kanye varicose veins
Izindlela zokwelapha ze-homeopathic zingasiza ekulwa nesifo somlenze okhathele nemivimbo ye-varicose, ikakhulukazi izinyanga ezishisayo zonyaka.
Kulesi simo, inhlanganisela enhle yokuthuthukisa ikhwalithi yokuphila kuyoba ukusetshenziswa kwamakhemikhali asekhaya ngokusetshenziswa kwezitshalo zokwelapha, esesikhulume kakade kwesinye sezihloko ezandulele.
Amakhambi ase-homeopathic enza kube lula ukuthwala ukushisa. Phakathi nezinyanga zasehlobo, ikakhulukazi ezindaweni ezihlala ezindaweni ezifudumele, ukukhukhumeza nokuzizwa komunyu emilenzeni kunamandla kakhulu. Okulandelayo, sikunikeza amanye amathuluzi ukuze sikwazi ukudlulisela ukushisa: i-Lachesis mutus, i-Naja y Vipera 5 CH (i-centigrade, amakhulu eHahnemann); 3 amaphilisi we-agent ngayinye izikhathi ezingu-3 ngosuku. Izimali ezifanelekayo ezinsukwini zokuqala: Natrum sulfuricum 5CH; 5 amaphilisi nsuku zonke amasonto 2-3. Leli thuluzi kufanelekile izakhamuzi zalezo zindawo lapho isimo sezulu esishisayo kuphela, kodwa sinomanzi.
Ukwelashwa kwe-homeopathic ukunciphisa umuzwa wokukhathala emilenzeni. Iphilisi elilodwa njalo ekuseni nakusihlwa ngenxa yalezi zinto ezilandelayo: Acidum fluoricum 5 CH, Arnica Montana, Hamamelis virginiana 5 CH, Aesculus hippocastanum 5 CH.
Kusho ukuqinisa imithwalo yegazi. Ungasebenzisa izinto ezihlukahlukene, njenge: Cardicus marianus, ArnicaMontana, Acidum fluoricum, i-Calcarea phosphorice, i-Calcarea fluorica, i- Hydrastis Canadensis, i-Aesculus hippocastsnum, i-Pulsatilla, i-Hamamelis virginiana.
Ukuphathwa kwe-homeopathic: amathiphu
Amakhambi ase-homeopathic atholakale ngezindlela ezahlukene: ngendlela yamathebulethi, amaconsi, amabhola nama-ampoules for injection. Buza udokotela wakho ngalokho okulungile kuwe.
Khumbula ukuthi izimali zamanzi azidingeki ukuthi zifakwe ngokushesha. Bamba uketshezi ngaphansi kolimi imizuzu embalwa ukuvumela ukuthi ihlakazeke ngokuphelele.
Ngesikhathi ukwelashwa ngamakhambi asekhaya, ikhofi yenkunkuma, ugwayi nokuphuza utshwala. Akukwahle futhi ukuba udle ukudla okuqukethe.
Umsele wamanzi lymphatic
I-lymphatic drainage iyindlela yokuvuselela uhlelo lymphatic. Nguye onomthwalo wokususa ubuthi emzimbeni. Kungenzeka ukuthi uzwile nge-lymphatic drainage njengendlela yokwenza izimonyo ezinomphumela omuhle esikhumbeni.
I-Lymph yilezi zithazamisi ezicacile eziqukethe, ngaphezu kwezinye izingxenye, i-lymphocytes kanye nama-corpuscles abomvu, ngenxa yokuthi kusiza ukugcina ithoni yethambo. Uma ukusakazwa yi-lymphatic, kunezinkinga ezihlukahlukene, isibonelo i-cellulite.
Njengamanje, amanzi e-lymphatic enza njengendlela ye-cosmetology ehamba phambili kakhulu. Umthelela omuhle wesikhumba ukuthuthukisa ukujikeleza kwegazi. Ngakho-ke, izinqubo ezinjalo zifanele ukwelashwa kwemilenze ekhandlayo nemilenze ye-ivaric.
Ukubhubhisa ukuvuselela isimiso se-lymphatic
Inhloso yokusikhipha imishini ukuvula amathangi e-lymphatic, ukuze akwazi ukukhipha izimbisi ezingaphezulu. I-therapist iqala inqubo ngokucubungula ama-nodes aphezulu, bese kancane kancane wehla. Khona-ke uhambisa massage ngendlela ehamba phambili. Ngokuvamile, ukuze kuthuthukiswe ngokuphawulekayo, okungenani ama-4 asebenza ngenyanga ngenyanga kwezinyanga ezintathu adingekayo.
Yiqiniso, kungcono uma amanzi e-lymphatic eqhutshwa ngumchwepheshe. Noma kunjalo, ungakwazi ukuzimela ngokuzimela uma ulandela izincomo ngezansi.
Okokuqala, ungakhohlwa ukuthi massage kufanele ngaso sonke isikhathi kwenziwe ngothando ngobunono kalula. Izinyathelo kulokhu zizochaza imizuzu emithathu. Qala inqubo ngokusikhipha umlenze owodwa futhi uma udlula zonke izinyathelo, iya ekucubunguleni komunye umlenze.
Faka intendeni enkabayeni ezingeni le-tank, lapho i-lymph igxila khona. "Vula" iminwe ngayinye, njengokungathi uthinta okhiye wepiyano. Thatha izikhathi zokwamukela izikhathi ezingu-10.
Beka izandla zakho ezinhlangothini zombili zamadolo, ukuze isithupha sibheke phezulu bese sihlalisa ngokunyakaza okuyisindilinga ekuqondeni kusuka kwesithupha kuya emunwe omncane. Bese udweba le nqubo ngokuphambene - kusuka emunwe omncane kuya kumunwe omkhulu, wehla ezinyaweni.
Khona-ke, ngezimpaphe zeminwe yakho, uhlanganise ukunyakaza kwesimiso seminyango, amafindo atholakala ngemuva kwamadolo, nezindawo zesifunda esiphezulu.
I-kasosteopathy ithonya ukujikeleza kwegazi
I-osteopathy ifaka isandla ekusebenzeni okujwayelekile kwezitho zangaphakathi, ikakhulukazi izitho zomzimba, okwenza buthakathaka ingcindezi emithanjeni yegazi, kuthuthukisa ukugeleza kwegazi nokujikeleza kwegazi emanzini ezansi.
Inhloso yale nqubo yindlela yokwelapha izilonda ze-osteopathic, okungukuthi, ukungahambi kahle kunoma iyiphi indawo yezinsimbi zamandla. Ngakho-ke, i-osteopathy ibhalwe ngokukhethekile kulezo zimo zokuntuleka okweqile okuhlobene nezinkinga eziqinile ezihambisana nomgogodla. Isibonelo, kuyasiza kubantu abachitha isikhathi esiningi bemi noma behlezi, benze umzimba omncane, futhi bahlushwa izifo ezingapheli zomgogodla.
Imilenze ivuvuka: izizathu, ukuthi yini okufanele uyenze, ukuthi ungakugwema kanjani
Besifazane, nakekele imilenze yakho!
U-Vladimir Kristovsky wabonisa ubuso bakhe bendodana yakhe, ividiyo
Kungani i-ascorbic acid kufanele ibe khona ekudleni
I-Best Moisturizing Face Cream
I-orgasm yowesifazane nowokulingiswa
Ukwelashwa kwezicubu ezinobuthi ngamakhowe
Izindlela zokwelapha ezithandekayo
Yini abesifazane abafisa umona?
Ukuthuthukiswa kocansi ngaphambi kwesikhathi emantombazaneni
Indlela yokugwema amaphutha, ukuqala ukulungisa: amabhodi amathathu avela kubakhiqizi
Amazwi mayelana nokwesaba uthando
I-Symbol yeHellas: I-Athens yumuzi wamagquma ayisikhombisa
Ungalungiselela kanjani umhlangano ezingeni eliphakeme?